Sports – Page 2 – Puntland News
UEFA Oo Rajada Kooxaha Spain Ee Quarter Finalka Qiimeysay Iyo Barcelona Oo Heshay Qiimeyn (0%), Maxaa Lagu Qiimeyay Real, Atletico Iyo Sevilla?
Iyadoo ay jirto in Barcelona ay dooneyso iney taariikh ku hor sameyso indhaha qof walba oo kubadda cagta ah marka ay gurigeeda kusoo dhaweyso Paris Saint Germain todobaadkaan hadana UEFA ayaa aaminsan in gabi ahaanba aysan jirin wax rajo ah…
March 4, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 0
Daawo-Barcelona oo saddex dhibcood oo dahabi ah ka soo qaadatay Atletico Madrid.
Barcelona ayaa kooxa Atletico Madrid ka soo gaadhay guul dahabi ah waxayna kulankeedii ugu danbeeyay La Ligaha ee Vincente Celderon ku soo xidhatay guul ka caawin karta in ay xili ciyaareedkii saddexaad oo xidhiidh ah ku guulaysato koobka La Ligaha.…
Manchester United ayaa u dagaalami doonta iney markeedii shanaad ku guuleysato koobka League Cup, halka Southampton ay isha ku heyso iney markeedii ugu horeysay ku guuleyato, si kastaba Jose Mourinho kooxdiisa waxey diyaar u yahiin iney ku guuleystaan koobkii labaad…
Barcelona ayaa dooneysa iney fiidnimada caawa ah si kumeel gaar ah ula wareegto talada horyaalka La Liga saacado kooban ayeyna heyn kartaa madama xiliga dambe ee caawa ay ciyaari doonto Real Madrid oo la ciyaareysa Villarreal. Balaugrana kaliya 1-dhibic ayey…
Daawo Goalasha Bayern Munich oo 8 goal iyo waxba ku garaacday Hamburger SV.
Kooxda Bayern Munich ayaa sii xajisatay hogaanka horyaalka Bundesliga ka dib markii ay sideed gool iyo waxba ku xasuuqeen kooxda Hamburger SV oo marti ku aheyd Allianz Arena iyadoo maanta ay maalin weyn u aheyd tababarahooda Carlo Ancelotti oo u…
February 25, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 1
Daawo Goalasha Chelsea oo siidheeraysatay hogaanka horyaalka Ingiriiska.
Kooxda Chelsea ayaa sii dheereysatay hogaanka horyaalka Premier League iyagoo haatan 11 dhibcood kaga haya kooxda kaalinta labaad ee Man City oo berri ciyaari doonta ka dib markii ay 3-1 ku garaaceen kooxda Swansea oo marti ku aheyd Stamford Bridge,…
Chelsea vs Swansea City – Blues Oo Fursad U Heysata Dheereysato Hogaanka Horyaalka.
Chelsea ayaa heysata fursad weyn oo ay ku dheereysan karto dhibcaha ay ku heyso hogaanka horyaalka madama aysan ciyaari doonin kooxda kaalinta labaad ee Manchester City todobaadkaan. Blues 8-dhibcood ayey ka horeysaa Citizens, kuwaas oo loo baajiyay kulankoodii Manchester Derby,…
Wararkii ugu dambeeyey ee Mustaqbalka Weyne Rooney ee Manchester United.
Xiddiga Manchester United ee Wayne Rooney ayaa la sheegay in uu go’aansaday inuu ka dhaqaajiyo Manchester United, sannadaha kooban ee u hadhay kubadda cagtana uu ku qaato waddamo shisheeye. Wakiilka Wayne Rooney, Paul Stretford ayaa ku sugan dalka Shiinaha si…
Isku aadka wareega 16-ka ee Europa league oo la sameeyey iyo Man U oo madaxa lagashay.
Isku aadka wareega 16-ka tartanka UEFA Europa League ayaa la sameeyay iyadoo ay kasoo baxeen kulamo waaweyn oo xiiso leh, sidoo kalana ay isku jabi doonaan kooxo waaweyn. Isku aadka oo ahaa mid aan u xiiso badneyn marka lala barbardhigo…
MOW FARAH Oo afka furtay kana hadlay saamaynta ay kuyeesheen amaradii Donald Trump iyo in lagu soo celiyo Britain.
Orodyahanka Somali-Biritish-ka ah Mo Farah ayaa walaac kaga muujiyey go’aankii uu Madaxweyne Donald Trump ku xayiray inay dadka Muslimiinta soo galaan Maraykanka. Waxa uu ugu baaqay Donal Trump in Xayiradda cusub ee Muslimiinta keentay inuusan awoodi karin inuu soo booqdo…
January 30, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 0
C.Ronaldo oo ku guulaystay laacabika sanadka ee FIFA 2016.
Ciyaaryahanka ugu wanaagsan aduunka C.Ronaldo aayaa waxaa loo doortay weeraryahanka kooxda isagoo abaalmarintan ka dulqaaday ciyaaryahanada kala ah Griezmann iyo L.Messi Weeraryahanka Kooxda Real Madrid ayaa mar kale noqday ciyaaryahanka ugu wanaagsan aduunka xili uu isla sanadkan ku guuleystay xidiga…
January 10, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 0
Majalada France Football oo sanadkan bixinaysa abaal marinta ay aas aaskeeda samaysay sanadkii 1956 kii ee Ballon d’Or oo ay dib ugula soo laabtay FIFA ayaa haddaba bilawday shaacinta qaybtii loo kala helay codkii la bixiyay iyo waliba kaalmihii ay kala…
December 13, 2016 · by	Mohamed Sheikh · 0
Cristiano Ronaldo ayaa markii afraad ku guulaystay abaal marinta shaqsiga ah ee xidiga aduunka ugu fiican ee Ballon d’Orka kadib markii uu Lionel Messi iyo xidigihii kale ee la tartamayay ku garaacay codbixintii ay suxufiyiinta ay France Football u soo…
Isku aadka wareega 16-ka ee Champions League oo la sameeyay (Yaa isku aaday).
Xiriirka kubadda cagta yurub ee UEFA ayaa si rasmi ah u sameeyay isku aadka wareega 16-ka ee koobka horyaalada yurub. Kulamo adag ayaa ka soo baxay isku aadka, waxaana isku aaday Bayern Munich iyo Arsenal, PSG iyo Barcelona, Arsenal ayaana…
December 12, 2016 · by	Mohamed Sheikh · 0
Sawirro-Chelsea oo kusoo laabtay hogaanka horyaalka Ingiriiska.
Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa guul rafaad badan ka gaadhey dhigeeda West Brom kulan katirsanaa horyaalka Ingiriiska waxaa ay goalkaas uga mahadcelinaysaa Diego Costa, taas oo kadhigan inay 3 dhibcood ku hogaaminayso horyaalka England. SAWIRRO
Xaqiiqooyin iyo warbixino laga diiwaangeliyey kulamadii 15aad ee Horyaalka Spain.
Real Madrid ayaa badisay kulankeedii 35aad ee tartamada oo dhan waana rikoor dhanka guulaha ah oo uu sameeyay macalin Zidane. Sergio Ramos ayaa dhaliyay shan gool xilli ciyaareedkan, waana in ka badan daafaca kasta oo La Liga ka ciyaara tartamada…
Shaxda Rasmiga ah ee Kulanka galabta dhexmaraya Chelsea iyo West Bromwich Albion
Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa galabta kulan xiisabadan martigelin doonta kooxda West Bromwich Albion, kulan katirsan horyaalka Ingiriiska iyadoona ay Blues guul u baahan tahay si ay hogaanka horyaalka ugu soo laabato. Haddaba shaxda rasmiga ah ee labada kooxood…
Kooxda Atletico Madrid ayaa qorsheeneysa in ay badal ugu dhigaan tababare Diego Simeone, maclinka naadiga Spours-ka Mauricio Pochettino sida laga soo xiganayo wargeyska The Mirror. maadaama uu macalinkan shaki xoogan galay mustaqbalkiisa kooxda Reer Spain. Diego Simeone ayaa lala xiriirinayaa…
Liverpool iyo Tottenham Hotspur oo ku dagaalamaya saxiixa Javier Hernandez.
Kooxaha kadhisan England ee Liverpool iyo Tottenham Hotspur ayaa lagu soo waramayaa inay gorgorinayaan goal dhaliyaha kooxda Bayer Leverkusen striker Javier Hernandez, si ay usoo qaataan bisha January ee sanadka 2017. Hernandez, oo 28 sano jir ah ayaa sanadkii hore…
Dhibaatadii qaboobaha Arsenal oo bilaabatay iyo xidig muhiim ah oo mudo ka maqnaanaya.
Difaaca khadka dhexe ee kooxda Arsenal iyo xulka Germany Shkodran ayaa garoomada ka maqnaan doona inta ka dhiman sanadkaan, kadib dhaawac soo gaarey. Ciyaaryahankii hore ee Valencia ayaa takhaatiirta Gunners waxa ay sheegeen inuu garoomada ka maqnaan doono mudo saddex…
Macalin Zinedine Zidane iyo fardihiisa oo taariikh cusub u dhigay kooxda Real Madrid.
Kadib guushii ay Real Madrid ka gaareen Deportivo La Coruna kulankii xalay ka dhacay garoonka Santiago Bernabeu markaas oo ay ku adkaadeen 3-2, Zidane iyo Wiilashiisa ayaa dhigay taariikh hor leh oo taariikhda u galay kooxda boqortooyada madama aan laga…
Macalin Pepe Guardiola oo difaacey kooxdiisa kadib guuldarradii Leicester City.
Macalinka kooxda Man City Pepe Guardiola ayaa ka horyimid in uu eedeyn usoo jeediyo kooxdiisa inkastoo guul darro xooggan ay kala kulmeen kooxda Leicester City oo kaga badisay 4-2. Kooxaha Ingiriiska waxa ay ku wngsn yihiin kubadaha rogaal celiksa waxaana…
Luis Enrique oo shaki geliyey mustaqbalka Lional Messi ee kooxda Barcelona.
Tababaraha kooxda Barcelona Luis Enrique ayaa diiday inuu cadeeyo in Lional Messi uu sii joogi doono kooxda isla markaana uu saxiixi doono heshiis cusub. Qandaraaska uu kula kooxda Barcelona kabtanka Argentin Lional Messi ayaa ku eg sanada 2018-ka waxa uuna…
SUUQA: Aubameyang -Man City, Mesut- Man Utd, Jesse Lingard- Arsenal, John Terry Oo Sii Joogaya Chelsea…
Agaasimaha kooxda kubada cagta ee Manchester City Txiki Begiristain ayaa indho-indheeyaal u diray dhaliyaha sare ee kooxda Borussio Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang, 27. (Sun on Sunday) *West Ham United ayaa isku dayi doonta saxiixa goolhayaha 29 sano jirka ah ee Man…
Warbixin-Kooxaha Horseed iyo Comsed Oo Galabta Kulan Xiisa Badan Ku Balansan Mira-awaare.
Garoonka kubadda cagta magaalada Garoowe ee Mira-awaare waxaa galabta kulan xiisabadan kudhexmari doonaa kooxda Horseed Fc Garoowe iyo kooxda Comsed ee magaalada Galkacyo. Kulankaan Classicada ah ee dhexmaraya labada kooxood ayaa qayb ka ah koobka lagu soodhoweynayo koox dhalinyaro Soomaaliyeed…
November 22, 2016 · by	Mohamed Sheikh · 9
Sawirro-Tartan Xiisa Badan Oo Garoowe Ka Fumray Garowe City iyo Australia Oo Isku Agdhacay iyo Horseed iyo Comsed Oo Iskudhegan.
Garoonka kubadda cagta Mira-awaare ee magaalada Garoowe ayaa galabta ka furmay tartan lagu soodhoweynayo koox katirsan kooxaha Soomaalida wadanka Australia. Daahfurka koobkaani ayaa waxaa ka qaybgalay wasiirka shaqada shaqaalaha, dhalinyarada iyo ciyaaraha Cabdiraxmaan Sheekh Cabdulle, agaasimaha dhalinyarada iyo ciyaaraha Axmed…
November 21, 2016 · by	Mohamed Sheikh · 17
November 9, 2015 · by	Mohamed Sheikh · 1